Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi owesifazane oshadile angakwazi ukuthi umyeni wakhe wenzani umndeni. Inombolo yezingxabano iyakhula futhi le nkosikazi inquma ukuveza lo muntu ngemuva komnyango. Kodwa yini okufanele yenze uma isinqumo siphuthumayo futhi othandekayo ufuna ukubuyela?
Uma unesimo esinzima kangaka, ungasheshi. Ufuna ukubuyisa umthandi wakho? Kulesi simo, yimisa, zama ukuqonda kahle isimo, uqonde ukuthi iyiphi iphutha lakho, bese uzama ukuphuma ngendlela.
Khumbula ukuthi zonke izenzo zakho kufanele zibe nenjongo. Esimweni esingaphambene nalokho, amathuba okuba nomphumela omuhle ayenzi zero.
Kodwa ungaba kanjani kuleso simo? Lapha kuyodingeka ukhulume ngobuqotho nawe ukuze uqonde ukuthi yini oyitshalile ukuthi umyeni akakho nawe manje. Ekugcineni, nguwe owamcela ukuba ashiye!
Sicela uqaphele ukuthi ukuzikhohlisa kwakho ngeke kuholele kunoma yini enhle-uzongena ekujuleni kwenkinga yakho, kunokuba uthuthukise futhi uqonde kahle ukuthi yini eyakuxhomeke kuwe. Njengoba ungabona, le ndlela ikuvumela ukuba uthole ukuthi ubani olawula isimo futhi owesifazane kulokhu uyisusa esiyinhloko salolu daba, isimo sesisulu yisinqumo esibi kakhulu.
Okokuqala, zama ukukhumbula ukuthi umyeni wayebi yini njengoba ayebonakala kuwe. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi abesifazane ngokwabo bacabange lesi simo bese beyihlobisa kuze kube seqophelweni lokungacabangi. Iqiniso liwukuthi, sivame ukucabanga ukuthi umyeni uwile othandweni, unikeza ukunakekelwa okwanele, futhi okungajwayelekile ukuletha izimbali? Sicela uqaphele ukuthi lokhu akukona ukuthi yikuphi ngempela, kodwa lokho okubonakala kubonakala kithi kuphela. Futhi manje cabanga ukuthi zingaki izinto ezithakazelisayo ezingakwazi "ukucabangela" inganekwane.
Njengomphumela wezimo ezinjalo ezithandwayo, siyeka ukuqonda iqiniso futhi siqale ukuphila nezilindelwe. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi indlela enjalo isiphelile.
Okulandelayo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi yikuphi okuhle okwenziwe yiyo oshade naye ngenkathi usuhlangene. Ukuphila okuhlanganyelwe ngumuntu ovamile kunciphisa kakhulu lokho okubizwa ngokuthi umngcele wokuzwela ezenzweni zakhe ezinhle. Ngamanye amazwi, uma unyaka wokuqala wokuphila komshado owesifazane ujabule kuzo zonke izibuko noma isipho sembali yakhe ethandekayo, emva kweminyaka eyishumi yomshado kuvela ukuthi kakade kakade kuncane kakhulu izimbali zama roses.
Ukuze bazigcinele ngendlela futhi bazise izimfanelo ezinhle zomuntu othandekayo, izazi zezokwelapha ziye zavela ngokuzivocavoca okulula: Kwanele ukubhala nsuku zonke encwadini ukuthi yini indoda enhle ekuphumeni. Ake sithi umyeni wami wageza izitsha zakhe-amlethe "fat," wahamba epaki ngezingane - uthole enye isibonakaliso esengeziwe. Uma ungenabo ubuvila, emva kwamasonto ambalwa ungabona ukuthi isimo sakho sengqondo kumyeni wakhe siyashintsha.
Esinye isici senhliziyo yesifazane ephazamisa ukuxhumana okubambisana namalungu obulili obuhlukile ukuthi kulindeleke ukuba umuntu aqagele lokho esikufunayo kuye.
Uma wakha ubuhlobo ngale ndlela, kuvela ukuthi umuntu uhlala efuna njalo, futhi owesibili uphoqeleka ukuba agijime njenge-squirrel esiteshini ukuze ahambisane nalezi zidingo. Vumelana ukuthi umdlalo onjalo kumnikazi, uhlose inkosikazi nesigqila sakhe kuzothanda kuphela labo abazimisele ukulalela umthetho. Ngaphezu kwalokho, kungani kufanele njalo umyeni abe nesibopho kulokho akwenzayo, futhi ngenxa yalezi zindinganiso azange azithethelele? Ngokwakhiwa komndeni, kufanele uqonde kusengaphambili ukuthi ubudlelwane obuhle ngeke busebenze, ngoba kulokhu okunye kumele kube khona ukutshala imali, kanti enye isebenza njengomthengi, inganiki lutho kumlingani wakhe ngokubuyisela.
Ngokufanayo, ukuthi umyeni usondelene nawe, kubalulekile ukuzama ukubuyela ebuhlotsheni bokuthi uthembele ngaphambili, ukwenza ukuthi oshade naye, ongekho esikhathini esidlule, abeke isandla sakhe emngceleni, umngane wabo wangempela. Kusobala ukuthi akulula kakhulu ukuguqula isimo ngale ndlela, kepha ukuze ubeke izitini zokuqala ngaphansi kobudlelwane obuqinile obuvuselelwe, kuyadingeka:
Ukuvuma mina nomyeni wami ukuthi wenze uchungechunge lwamaphutha amakhulu. Yiqiniso, ungalindeli ukuthi othandekayo uyakunqanda ngokushesha ukumukela futhi abuyisele ngamaqoqo egcwele. Nakuba le ndlela ayiyona eyodwa.
Yeka ukucabanga ngezimo. Uma ungathanda ukuthola izimbali kumyeni wakho, kodwa akakwazanga ukufunda imibono yakho, akukho iphutha lakhe. Cabanga kangcono ngalokho ongayinika wena oshade naye.
Zama ukufunda ukuze ubone ngisho nezenzo ezincane kunazo zonke futhi ubonge ngazo kusukela phansi kwenhliziyo.
Zama ukuba nesithakazelo ezinkingeni zomyeni wakho, thola ukuthi umsebenzi wakhe ungubani, ukuthi uhlalaphi, lokho akubonayo, lokho akuphuphayo.
Sicela wazi ukuthi lezi zincomo zinikezwa ngokulandelana okuthile. Kungaba kuhle uma ulandela ngokucacile iphuzu kuze kube iphuzu, bese kuthi amathuba okubuyisela umyeni azokhula kakhulu.
Kulungile ukuziphatha kanjani nomfana emva kokumanga kokuqala?
Kungcono ukhethe uthando noma umsebenzi?
Indlela yokufakazela uthando lwakho kumuntu othandekayo?
Kuthiwani uma uthando seludlulile?
Ukuzalwa kweNkosi 2016: usuku lomkhosi, amasonto, amasiko
Amaphutha amakhulu amathathu ekunakekisweni kwesikhumba: indlela yokulungisa ngayo
U-Efim Shifrin wayemthanda umdwebo wezemidlalo, isithombe esivela ku-Instagram
Ingulube kuhhavini e-foil ne-sleeve: zokupheka okumnandi kunazo zonke kanye nesithombe
Uma umyeni ebuhlungu
Qedela kusuka ku-viburnum
Indlela yokuqaphela udlame wesilisa
Izinwele zezinwele ezihamba phambili kunazo zonke zezingubo zomuntu 2016: yiziphi izinwele zokukhanda ezizoba yindabuko kakhulu, i-Autumn-Winter 2015-2016, isithombe
Imiphumela yokubhoboza inkaba
Strawberry pistachio "ibhomu"
I-low-calorie, ukudla okuhlwabusayo okunempilo nokuphilile ngaphandle kokulimaza kumuntu
Ukuhlanzeka kwengane: isikhumba, izipikili, izinwele